दौरादोस नगरपालिकामा अवस्थित क.लिदिया र क.पलाभियाको घर हाम्रो गन्तव्यको पहिलो थकाई मार्ने स्थल बन्यो । क.लिदिया यस राहुका सबैजसो क्षेत्रमा ग्वारानी जातिको बारेमा आफ्नो संस्था ‘सिमी’मार्फत कास गर्नेको बारेमा धेरै जानकारी राख्ने व्यक्ति/महिला हुन् । ग्वारानी जातीको उत्पति, विकास, संघर्षका नालीबेली मात्र हैन यसले आफूले भोगचलन गरिहेको जमिनको स्वामित्व कायम गराउन निरन्तर क्रियाशील रहेको हामीले थाहा पायौं ।
केही समयको आराम÷खानापश्चात हामी छलफल र जानकारी लिने काममा लाग्यांै । यसले हाम्रो भोलिको कार्यक्रमलाई सहज बनाउने सक्थ्यो । क.लिदियाका अनुसार ल्याटिन अमेरिका ब्राजिलको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको यस स्थानमा ग्वारानी (आदिवासीको एक जाति) को संख्या धेरै छ । सयौ वर्षेदेखि बसोबास गर्दै आएको अति विपन्न र चरम गरिबीको शिकार बनेका यस जातिको संघर्ष कहालीलाग्दो छ ।
यहाँका ४०१ (परिवार संख्या÷व्यक्ति)ले आफ्नो पुस्तौदेखि भोग चलन गर्दै आएको जनिम फिर्ता पाएका छन् भने ५०९ अझै आफ्नो जमिनमा आफ्नो पहिचान कायम गर्न पाएका सकेका छैनन् । आफ्नो जमिनको क्षेत्र निर्धारण गर्न असफल भएकै कारण पटक–पटक ठूला किसानहरुबाट पीडित र प्रताडित बन्नु परेको छ । आफ्नो बसोबासबाट पटक–पटक लखेटिनुपर्ने, भोग्नुपर्ने वा विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता यहाँको आदिवासीको रहेको छ । यसकारण १७००० जनसंख्याले जम्मा ३०००० हेक्टर जमिनमा जिवनयापन गर्नुपरेको छ ।
यस्तो छ ब्राजिलका आदिवासीहरुको स्थिति
१. आदिवासीहरु शान्त स्वभावका हुन्छन् तर आफ्नो पुस्तौदेखिको प्राकृतिक स्रोत साधनमा बढ्दोे अतिक्रमण र मनोमानीबाट विक्षिप्त बनेका छन् । वातावरणीय प्रदूषण, वनविनास, बालीनालीमा अतिविषादीको प्रयोगका कारण आदिवासीको मानवीय जिवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । परिणाम स्वरुप हत्या, हिंसा, आत्महत्या र मानसिक सन्तुलन गुमाउने खालका समस्याहरु बढ्दो क्रममा छन् । वार्षिक ८–२५ जना सम्मले आत्महत्या गरेको रेकर्ड छ ।
२. सन् १९८८ अक्टोबर ५ मा बनेको संविधानले आदिवासीहरुको क्षेत्र निर्धारण गर्दै अधिकार सुनिश्चित गरेको हो । तर समय क्रमसगै ठूला किसानहरुले आदिवासी समुदायको क्षेत्र हडप्दै त्यसलाई विभिन्न बहानामा औपचारिकता दिने गरेका छन् । सन् २०१० मा आदिवासीहरुको पहिचान गरी अवस्था, इतिहास, धर्म, संस्कार, भाषा आदिको आधारमा ३०५ वटा आदिवासी रहेको दस्तावेज छ भने अझै ५०० वटा आदिवासी समुदायको पहिचान राज्यले दिएको छैन ।
३. ७ वटा प्रदेशमा ग्वारानी क्वाइवाको बसोबास छ । ग्वारानी आदिवासी मध्ये ७७%ले आफ्नो जमिनको स्वामित्व हासिल गरेका छैनन भने अन्य ३३% आदिवासीको पनि विस्थापित र पुर्नस्थापनाको क्रम चलिरहन्छ । ‘गर वा मर’को अवस्थामा रहेका यहाँको ग्वारानी जाति ‘बरु आफू मर्न तयार छौ तर आफ्नो जमिनको पहिचान गरी स्वामित्व लिएरै छाड्ने’ दाबी गर्छन् ।
४. यहाँ मानिसहरु बिना कारण कुटिन्छन् लखेटिन्छन्, कति ठूला किसानबाट मारिन्छन् तर न कसैलाई कारवाही हुन्छ न त घटनाको बारेमा अनुसन्धान नै हुन्छ । कति त मृृत शरीर गायब पारिन्छ । संविधानले नागरिकको स्तर दिएर के गर्नु ? आफ्नो र आफ्नो सामुदायको यो अवस्थाबाट दिक्क भएर युवाहरु कि हत्या गर्न पुग्छन् कि त आफै आत्महत्या गर्दछन् ।
अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थी छन् । उनको घर ब्राजिलको साव पाउलो नजिकै छ । अध्ययनको लागि उनी त्यहाँ भाडामा बस्दै आएकी रहेछिन् । आत्मीय सत्कार, मैत्रीपूर्ण वातावरणमा क मरियानासंग बस्ने हामीलाई निकै सजिलो भयो । मरियाना आफ्नो प्रोफेशर गाभीबाट प्रभावित भएर माक्र्सवादमा झुकाव बढ्न गएको बताउथिन् । ‘विश्वका धेरै देशहरु मध्ये पुग्ने पर्ने र अत्यन्त सुन्दर देश नेपाल हो’ नेपाल भ्रमण गरेका आफन्तले भनेका रे । नेपाल जाने र हिमालको नजिक जाने उनको धोको छ । मैले नेपाल भ्रमणमा चाडै आउन भनेको छु । हामी बिहान ८ बजे पुग्यौं । यो ब्राजिलभरमा आदिबासीको बारेमा अध्ययन अध्यापनको अनुमति पाएको एकमात्र विश्वविद्यालय हो । यहाँ यसको साथै समाजशास्त्र स्वास्थ्य, लैङ्गिक अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा पढाई हुने रहेछ ।
६. सामाजिक, शैक्षिक र साँस्कृतिक अवस्था विद्यालयको शिक्षा पार गरिसकेपछि आफ्नो सामुदायकै विषयमा केन्द्रित भएर विद्यार्थीले अध्ययन गर्न र प्रयोगात्मक प्रयोग सहित व्यवहारिक शिक्षा लिन यहाँ आउने गर्दछन् । मुख्यतः ग्वारानी जातका आदिवासीको संघर्षलाई जीवन्त राख्न, नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिन चाहान्छन् । आदिवासी आन्दोलनको सकारात्मक उपलब्धीको रुपमा यस विश्वविद्यालयलाई लिन सकिन्छ । आदिवासी विद्यार्थी यसलाई राज्यले आफ्नो सामुदायलाई गरेको सम्बोधन भन्ने मान्दछन् । युवा र महिलाहरुले आफ्ना माग र आवश्यकतालाई छुट्टा छुट्टै माग राख्ने र एकअर्का संग सहकार्य गर्दै जाने गरेका छन् ।
हामीले यहाँका विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा भेटेर परिचय गर्ने अनुभव आदानप्रदान गर्ने र अध्ययन अध्यापन विधि बारेमा छलफल ग¥यो । उमेरका हिसाब भन्दा पनि अनुभव र भोगाइको हिसाब गर्ने अवस्था त्यहाँ थियो । बुवा–छोरी एउटै कक्षामा अध्ययन गर्ने गरेको देख्दा खुशी लाग्यो ।यहाँको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको यहाँ आफ्नो बच्चा आमा सगै कक्षा कोठामा बस्न पाउने व्यवस्था रहेछ । ल्याटिन अमेरिकाका अन्य विश्वविद्यालयमा पनि यो व्यवस्था रहेछ । किनभने बच्चा ५ वर्ष नपुगुन्जेल आमा सगै वा एकाघरकै परिवारका सदस्यसंग बस्न पाउने बालअधिकारको व्यवस्था यहाँ रहेछ ।
हामीले अवलोकनको क्रममा विद्यार्थीले निर्माण गरेका आदिवासीको जिवनशैली झल्काउने सामाग्रीहरु हे¥यौ । मान्द्रो, कुचो, गुलेली, थुन्चे, ढकी, भाला आदि सामाग्रीहरु थिए । खर वा घास पातहरुबाट बनाएको प्राथना घर थियो । काठको बिचमा प्वाल पारेर बनाइएका भाडा वर्तन पनि राखिएको थियो ।
नजिकै एनिमल साइन्सकी विद्यार्थीले खरायो पालन व्यवसाय सुरुवात गरेकी रहिछिन । हामी त्यहाँ गयौ र हे¥यौ । उनले भनिन हाम्रो प्रयोगात्मक कक्षाको लागि पनि यो आवश्यक छ साथै यो सानो व्यवसाय पनि हो । यहाँ, सानो लगानीबाट पनि काम सुरु गर्न गराउन सकिन्छ , जुन नेपालमा पनि सजिलै सम्भव छ भन्ने लाग्यो । क दमियाना (४९ंवर्ष) को कथा खाना सजिलै पश्चात हामी आदिबासी समुदाय ग्वारानीको एक साना बस्तीमा पुग्यौ बस्ती भन्दा पनि सडक नजिकैको एक घरमा पुग्यौ , जहाँ एक जना वृद्ध एकल महिला (५० वर्ष) संग भेट भयो । क.दमियान क.लिदिया पहिले पहिले पनि त्यहाँ पुग्ने, दुख सुख सुनिदिने गर्ने भएकोले चिनजान रहेछ । वृद्ध महिलाले सबैसंग दरो संग हात मिलाउन र अंकमाल गरिन ।यो यहाँको चलन नै रहेछ सबैतिर ।
मेरो घर उता सडक पारी हो । हाम्रो पुस्ता मैले जानेदेखि त्यही बसेको थियो ।तर अहिले त्यहाँ सुगरमिल छ । हामीलाई कुनै मुआब्जा बिना जबरजस्ती त्यहाबाट हटायो । मेरो खेतबारी गरि खाने ठाउँ त्यही थियो । अहिले जाने अनुमति छैन । सरकारले सुरक्षा दिन भनेर सेना । पुलिस खटाएको छ । त्यो ठाउँबाट विस्थापित हुने बेलामा गोली चलायो । हाम्रो जमिनको स्वामित्व खोसियो । सरकार र ठुला किसान हाम्रा दुश्मन बनेर आए । यहि आन्दोलनको क्रममा हामीले ५ जना गुमायौ आन्दोलन गर्दा गर्दै मेरो श्रीमानको मृत्यु भयो उनले भक्कानिदै भनिन् । मेरो १०वर्षको नातीलाई सडकमा ट्रकले नियतवस किचेर मा¥यो । त्यो ड्राइभर आदिबासी विरोधी हो त्यही भएर उसलाई कुनै कारवाही भएन् ।
हामी उनको घरमा पुगेपछि उनले आफ्नो पोशाकमा केही आदिबासीको पहिचान थपेर निस्किइन् । टाउकोमा फुल बुट्टा देखिने रुमाल र घाटीमा अन्नबाट बनाइएको माला लगाएर आइन् । उनले विरक्त लाग्दा भाषामा एउटा वासको मोटो डण्डी समाइन र भुइमा ठोक्दै भाकामा गाउन थालिन । हामी सबैले साथ दियौं । छिटो–छिटो गाउन थालिन । हामी गोलो भएर अगाडि पछाडि गर्दै गायौ । हामीलाई लाग्यो कि आफ्नो कोही नहुदा कोही अपरिचित मानिस पनि आफ्नो लागेर होला मनको भावना पोखेको हुन सक्छ । तर यो आम आदिवासीको संस्कृति रहेछ । पाहुना आउदा स्वागत गर्ने, बिदाई गर्ने, खाना खानु अघि सोही गित गाउने चलन रहेछ ।
सयौं बर्षदेखि त्यस ठाउमा बस्दै आएको ठाउँ छोड्न किन बाध्य पारियो ? यति धेरै पिडा र समस्याको बिचमा पनि किन क.दमियाना पुन आफ्नो जमिन पाउने विश्वास सहित संघर्ष गरिरहेकी छन् ?
सन् १८८९ मा ब्राजिलमा दासप्रथा कायमै थियो । १९४५ ताका ल्याटिन अमेरिका, अमेरिकाको उपनिवेशमा दोस्रो विश्वयुद्ध थियो । यस समयमा (१९३०–१९४९) ल्याटिन अमेरिकामा औधोगिक क्रान्तिको समय अवधि हो । यस समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वमा नै आफ्नो साम्राज्य जमाउदै थिये । यद्यपी स्वय अमेरिका व्रिटेनको उपनिवेशबाट मुक्त भैसकेको थिएन । यो बेला ब्राजिलको पुर्वी भागमा पने ‘मातो ग्रासो दो सोउल” प्रदेशको आसपासमा प्रशस्त उब्जाउ जमिन माथि अमेरिकी उद्योगपतिहरुको आखा लाग्यो । ठुला कृषि उत्पादन खास गरी चिनि उद्योग अभियानको लागि स्थानिय सेना प्रहरीको वटालियननै थिए । तर कालान्तरमा ल्याटिन अमेरिका (ब्राजिल)को सरकार र सरकार संचालकहरुले त्यहाँका (जनजाती) आदिबासीहरुलाई कुनै उद्योगपति र ठुला किसानकै सपोर्ट गर्न थाले ।
५०० वर्ष पुरानो इतिहास रहेको ग्वारानी कवाइवा जाति १०० वर्ष देखि निरन्तर त्यही ठाउँमा बस्दै आएको छ । ब्राजिल भरी ६००० भन्दा बढी ग्वारानी क्वाइवा छन भने ८०% ग्वारानी जाति यस प्रदेशमा बसोबास गर्छन । ब्राजिलमा मात्र हैन ब्राजिलको सिमाना पर्ने बोलिभिया, पारागोया, अर्जेटिना लगायतको देशमा पनि यो आदिवासी सामुदाय ठुलो संख्यामा बसोबास गर्दछन । ग्वारानी क्वाइवा जाति पारागोय नदीको आसपास र सिमानालाई आफ्नो उदगम स्थलको रुपमा दावा गर्दै आएका छन् ।यस क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतसाधन, खोलानदी र उब्जाउ जमिन देखेर नै अमेरिकी उपनिवेशले आफ्नो साम्राज्य जमाएका थिए । अहिले त्यसैको प्रभावस्वरुप पुजीपतिहरु आफ्नो पुजी लगानी गर्ने,उद्योग खोल्ने, बढी भन्दा बढी नाफा कमाउने र त्यहाका आदिवासीहरुलाई विस्थापित गर्ने गरिरहेका छन् । कसरी मधुरो स्वर बन्यो त ? ग्वारानी क्वाइवाका आदिबासीहरुको ? अमेरिकी साम्राज्यको समयमा यस क्षेत्रका ९५% मानिस जमिनको लागी लडाई लड्दा लड्दै मारिएका थिए ।
दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात अर्थात १९ औ शताब्दीको अन्ततिर र २० औ शताब्दीको सुरुवातका दिनहरुमा विश्वमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका संघ संगठन खुल्न थाले । जसले साम्राज्यवादी व्यवस्थालाई समयको आवश्यकताको रुपमा लिने गर्यौ । पुजीवादी बुर्जुवा वर्गको पक्ष पोषण गरी उपनिवेशलाई मलजल गर्ने काम भयो । विश्व बैंक, विश्व व्यापार संघ, संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुले आवरणमा गरिब, सिमान्तकृत वर्गको पक्षमा काम गर्ने भने पनि खास भित्रि उद्देश्य पँुजीपति र वुर्जुवलाई प्रोत्साहन गर्ने नै थियो । यसले गर्दा ल्याटिन अमेरिकाको ग्वारानी समुदाय प्रत्यक्ष प्रभावित भए । विस्थापित हुनुप¥यो । आफ्नै जमिनको लागी सधै लड्नुप¥यो ।
जमिन प्राप्तीको संघर्ष
सन् १९४९ मा ग्वारानी क्वाइवा समुदायले आफ्नो एक मिलियन हेक्टर जमिन गुमाउनु प¥यो । आफ्नो समुदायको बस्तीनै सखाप र ध्वस्त बनायो । एकाधिकार र साम्राज्यको सिकार बन्नुप¥यो । सेना प्रहरीको बटालियनको केही सिप चलेन् ।
दौराडोज नगरपालिका मातो दोसो दो सोउलको १२ नगरपालिका मध्ये एक हो । यहाँ २००५ देखि २०१५ सम्ममा ३ पटक आफ्नो बसोबास गर्दै गरेको जमिन छोडदै पुनः बस्नु परेको छ । एक स्थानियका अनुसार ‘हामीले २०१२ मा सरकारका १०० भन्दा बढी प्रहरी भ्यान र सयौको संख्यामा आएका सेना प्रहरी संग ३ दिन, ३ रात लड्नु प¥यो । अन्त्यमा सरकार र हाम्रो बिचमा सम्झौता गरेर यहाँ बस्न थालेका छौं ।’ उनले भने, ‘त्यसो त आफ्नो आधिकारिक बसाई र जमिनलाई पहिचानलाई स्थापित गर्ने चाहना नभएको होइन तर ब्राजिलको संविधान कानुन अनुसार जमिनको हिस्साको पहिचानको लागि धेरै कागजपत्र मिलाउनु पर्ने हुन्छ जुन हामीसँग छैन । तर पुँजिपति, उद्योगीहरुले विभिन्न बाटो प्रयोग गरी कागजपत्र मिलाउछन्’ ।
‘मेरो बुवा, हजुरबुवा, जिजुबाजे, यहि जमिनमा बसे, अहिले हामी छौं । म कल्पना गर्न सक्दिनँ, हाम्रो पुरानो पुस्ताले यो पीडा र समस्या भोग्नु नपरोस् भनेर हामी स्थानीय सरकारलेसंग समन्वय र सहकार्य गर्दै छांै । अहिले स्थानिय सरकारले हामीलाई गर्ने व्यवहारमा सकारात्मक सुधार आएको छ । हामी आशावादी छौ ।’
ग्वारानी क्वाडवा जातिको केन्द्र कारायो नगरपालिका
करायो नगरपालिका ग्वारानी क्वाइवाको जातिको उलेख्य संख्या रहेको छ । सन १९१४ देखि यस ठाउँमा बस्दै आएका ग्वारानी जातिको जमिन प्राप्तीका संघर्ष उस्तै छ । कानुनी बाधा र व्यवधान कायम नै छ । एक स्थानिय अनुसार २००८ मा प्रहरीको जत्या सबै घरहरु जलाइदियो । हाम्रा घरका सम्पुर्ण सामानहरु खाडल खनेर पुरीदियो । त्यस समयमा एक स्थानियको मृत्यु भयो ६ जना अहिले सम्म गोलीको छर्रा शरिरमा बोकेर हिडिरहेका छन् । सयौ घाइते भए र पिडादायी जिवन भोगि रहेका छन ।
यस नगरपालिकामा शिक्षक तथा प्रोफेशरको स्थायी बसोबास गर्दा, हाम्रो साझा उद्देश्य यहाँका ग्वारानी क्वाइवा जातिको जमिन प्राप्त गर्ने सघर्षमा सहयोग गर्ने हो सहभागी हुने हो । यहाँ अहिले ३५९५हेक्टर जमिन आदिवासी परिवारको नाममा पहिचान थियो ।जुन हाम्रो साझा उद्देश्यले पुरा भएको हो । जनसख्याको वृद्धि संगै जमिनको आवश्यकता बढ्यो । यसलाई बढाएर हामीले ५६००० हेक्टर बनाऔ । यहाँ ग्वारानी क्वाइवाको बसोबासका साथै अध्ययन जुन दिल्मा सरकारको समयमा भएको हो अनुसन्धानके लागी पनि हो । आदिवासीके जिवन, इतिहास, सघर्ष र आगामी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभुत अधिकारको बारेमा शसक्तिकरण जागरण ल्याउनु पनि हो । (स्रोतः एक प्रोफेसर)
अर्का प्रोफेसरका अनुसार यो जमिन आदिबासीको पहिचान यसै भएको छैन । यहाँ आसपासका ठुला किसानको ज्यादती बयान गरेर साध्य छैन । आदिवासी समुदायको पक्षमा रहेकै कारण हाम्रो २ जना प्रोफेसर मारिए । १ जनाको त लास पनि भेट्टाउन सकेनौ । यहाँका युवा सधै ठुला किसानका निसानामा पर्छन । आदिवासीलाई जागरण गरायो भनेर १६ वर्षे युवालाई मारेर खोलामा फाले ।
यहाँको ‘न्यायिक व्यवस्थानै फरक छ । कानुन आदीवासीलाई फरक छ । ठुला किसानलाई राज्यले सहयोग गर्छ, सहजीकरण गर्छ तर आदिवासीलाई लखेटछ् । यो सबै पुजीवादी समाज र वुर्जुवाहरुको अत्याचार हो ।’ एक युवाले भने ।
ल्याटिन अमेरिकाको जनसख्यामध्ये ९१% ठूला शहर र शहरका आसपासमा बस्छन् । शहरदेखि पर बस्ने भनेको ग्वारानी क्वाइवा जस्तै अन्य जनजाति सामुदाय हो । आदिवासी समुदायको नजिक बस्ने अन्यलाई उनिहरुको जिवन र सघर्षको बारेमा जानकारी नभएको पनि हैन तर उनिहरुलाई कुनै चासो छैन र केही बोल्दैनन् । बरु उल्टै सरकार र ठुला किसानको पक्षमा बोलिदिन्छन् ।
विद्यालयमा जान आउन यातायातको समस्या मुख्य समस्या हो । मुल सडकबाट केही भित्र (५–२५–३०) किलोमिटरमा आदिवासी बस्ती छ । जहाँ यातायातको साधन जाने अनुमति छैन । बस चढेर विद्यालय जान नै निकै समय हिडनुपर्ने हुदा बालबालिका स्कुल समयमा पुग्दैनन् बाटोबाटै फर्कन्छन् । ठुला किसानका छोराछोरीले पिट्छन् ।
सामाज्यवाद र उपनिवेशले ल्याटिन अमेरिकी आदीवासीको जिवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । पुँजीवादी र बुर्जुवा वर्ग नाफा कमाउन चाहन्छ । लगानी गर्न चाहन्छ । सरकार त्यसलाई सहयोग गर्छ । किनभने पँुजीवादीहरुको धर्म नाफा कमाउनु हो । तर नाफा कमाउने काममा जनजाति ÷आदिवासीहरुलाई संलग्न गराइँदैन । मात्र कामदारको रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।